🥇 ▷ Runley ayaa soo afjaraya Taageerida Xirmooyinka OS ✅
Runley ayaa soo afjaraya Taageerida Xirmooyinka OS
Runkeeper, oo ah barnaamij raadraaca jimicsiga, ayaa ku dhawaaqay in uu dhammaaday is-dhexgalkiisii ​​Smartwatches ee Wear OS. Isbedelku wuxuu horey u yimid nooca 9.13 ee dalabka ee ku shaqeynaya aaladaha Android, kaasoo ah inuu gaaro dadka isticmaala toddobaadyada soo socda.
Soosaarayaasha app waxay sheeganayaan in boqolkiiba aad u yar oo ka mid ah adeegsadayaasha app xitaa ay rakibeen oo adeegsadeen nooca Runkeeper Wear OS, oo ay weheliso dhibaatooyin la xiriira khibradda adeegsadaha iyo dhibaatooyinka la soo gudboonaaday iskudayada ay ku doonayaan in lagu xalliyo arrimahan.
“Maaddaama aan nahay koox yar oo leh ilo dhaqaale oo kooban, oo aan sameynay baaritaanteena, waxaan ku soo gabagabeynay isku dayga inaan sii wadno iskaashi aan si wanaagsan u shaqeyneynin ma ahan dhaqan fiican anaga,” ayay tiri kooxda taageere Runkeeper.
Xiro OS muddo dheer kama aysan fiicneyn lugaha, gaar ahaan ka dib markii Samsung ay ka baxday nidaamka. Summada Korean waxay u xushay Tizen astaamaha casriga ah iyo noocyada kale ee caanka ah ayaan sidoo kale wali soo saarin alaabada sida LG, Motorola iyo Asus.
Suuqa smart ee suuqa ayaa weli ku sii jira Apple, oo leh boqolkiiba 50%, waxaa ku xiga Fitbit oo leh 12.2%, Samsung iyo 11.8% iyo Garmin oo leh 7.1%. Midkoodna soo saareyaashan ma isticmaalaan Wear OS wax soo saarkooda, iyo astaanta leh nidaamka hawlgalka mobilada ee Google ee ugu wanaagsan xaaladdan waa Fossil, oo leh 4.1% joogitaan.
Barnaamijku wuxuu sii wadi doonaa inuu ka shaqeeyo Android, laakiin iyada oo aan lahayn diiradda muuqaal ee saacadaha smart iyadoo la adeegsanayo nidaamka hawlgalka ee Wear OS. Haddii aad haysatid wax smartwatch ah oo qalabkan ah, waxaa jira waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin Strava, Runtastic iyo Nike Run Club.
Macluumaadka: Android Central.